Seranan-tsambon’ i Toamasina: hatao lavanty ny entana tsy tafavoaka | NewsMada
Seranan-tsambon’ i Toamasina: hatao lavanty ny entana tsy tafavoaka
Tapitra ny fe-potoana 75 andro tokony ho nakan’ny tompon’ny entana mihitsoka ao anatin’ny seranan-tsambon’i Toamasina. Misy akanjo sy kasikety saika nampiasaina tamin’ny fampielezan-kevitra tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena 2013 amin’izy ireo.
Nanazava ny vadintany mpanao lavanty, ny Me Ambinintsoa, sy ny reseveran’ny ladoany Toamasina, Ramaherison Tolojanahary, mikasika ireo entana lany fe-potoana ao amin’ny seranan’i Toamasina, omaly. Araka ny lalàna manan-kery, tsy maintsy hatao lavanty ny entana tsy tafavoakan’ny tompony ao anatin’ny 75 andro. Azon’ny tompony atao ny mikarakara ny fandoavana ny saran’ny entany miaraka amin’ny saziny ary azony alaina ny entany, telo andro mialoha ny fotoan’ny lavanty.
Hatao ny 8 otkobra ho avy izao ny lavanty ampahibemaso, manomboka amin’ny 8 ora maraina ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina. Miisa 168 fonosan’entana (lots) ireo hatao lavanty, ahitana fiara vaovao, kojakoja an-dakozia, ny fitaovam-pianarana, zavamaneno.
Akanjo sy kasikety fifidianana 2013
Misy koa entana ao anaty kaontenera miisa 14 ahitana taratasy fanaovan-gazety. Misy koa akanjo sy kasikety nohafaran’ny kandidà saika hilatsa-kofidina tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena, ny taona 2013 teo, ao anaty kaontenera miisa efatra ka tsy fantatra na hisy hividy na tsy maintsy hopotehina na dorana.
Raha ny vidiny farany ambany, manomboka amin’ny 4 tapitrisa Ar hatramin’ny 75 tapitrisa Ar. Nilaza ny Me Ambinintsoa fa efa misokatra ny fisoratana anarana ampiarahina amin’ny fandoavana 10%-n’ny tentimbidin’ny entana tiana hovidiana ary mifarana ny 5 oktobra izany.